किन सहज छैन नेपालमा चिनियाँ लगानी ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
किन सहज छैन नेपालमा चिनियाँ लगानी ?
चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालले फरेन अफेयर्स को आशयलाई ध्यान राख्नैपर्छ । अन्यथा, श्रीलंकाको हम्वान्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १९औं महाधिवेशन (१–७ कात्तिक) ले ‘चीन महान आधुनिक समाजवादी’ राष्ट्र हुने घोषणा गरेको छ ।
त्यसका लागि झन् खुला आर्थिक नीति, समृद्ध विकास नीति, सुन्दर चीन नीति र सैनिक आधुनिकीकरण नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
नयाँ दस्तावेज अनुसार, चीनले झन् खुला भई गुणस्तरीय उत्पादन र बौद्धिक सेवाका साथ विश्वमा प्रभावकारी ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउने छ । त्यसका लागि विश्वव्यापीकरण र उसको ‘बेल्ट रोड’ पहललाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेछ । चीनले अब समृद्धि अभियानमार्फत सन् २०२० सम्ममा गरीबी निमिट्यान्न पारी २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य बनाएको छ ।
उसले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न सुन्दर चीन नीति कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तो ‘महान, सुन्दर, आधुनिक चीन’ को रक्षाको लागि २०५० सम्ममा चिनियाँ सुरक्षा बललाई विश्वकै पहिलोस्तरको बनाउने उद्घोष सीपीसीको १९औं महाधिवेशनले गरेको छ ।
चीनलाई ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाइनेछ’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ बुझ्न अर्थशास्त्री वाल्ट ह्विटम्यान रोष्टोको आधुनिकीकरण सम्बन्धी सिद्धान्तले सजिलो बनाउँछ । त्यसको प्रभाव बुझ्न चाहिं चीनको ‘छिमेकी नचिढ्याऊ’ नीति सान्दर्भिक हुन्छ ।
रोष्टोका अनुसार, आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्र (समाज) ‘एज अफ हाई मास कन्जम्प्सन’ को तहमा पुग्छ, जुन विकासक्रमको सबभन्दा उपल्लो तह हो । त्यो तहमा पुग्ने राष्ट्र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र श्रम बजारमा बौद्धिक सेवामा केन्द्रित हुन्छ ।
परनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार, विकसित राष्ट्रले अधिक नाफा कुम्ल्याउन आफ्नो वातावरण अमैत्री र अर्धदक्ष जनशक्ति अविकसित राष्ट्रहरूमा स्थानान्तरण गर्छ । गरीब देशको सस्तो श्रम र वस्तु विना अधिक नाफा कुम्ल्याउन सम्भव छैन । अनि अधिक नाफा विना देश आधुनिक नहुने स्वाभाविक सिद्धान्त हो ।
अतः चीनले पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई अधिक बनाएर स्थिर राख्न बौद्धिक बजार बढाएर नाफा कुम्ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
नेपाल गत वैशाखदेखि चीनको ‘बेल्ट रोड’ पहलमा संलग्न भएको छ । अब चिनियाँ लगानी नेपालमा ओइरिने प्रचार पनि भएको छ । सस्तो कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र बजारका लागि प्रचार भएजस्तो चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना पनि छ । चीनले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने नीति लिएको हुँदा उसका सस्तो र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अब नेपालमा स्थानान्तरण हुन सक्छन् ।
चीनका त्यस्ता उद्योगहरू अधिक कार्बन उत्सर्जनका लागि कुख्यात छन् । भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउन र देशलाई समृद्ध बनाउन नेपाललाई चिनियाँ लगानी चाहिएको छ । त्यसो भन्दैमा वातावरण प्रतिकूल थोत्रा उद्योगहरू भित्र्याउनु चाहिं घातक नै हुनेछ ।
कूटनीतिमा चिनियाँहरूलाई जति सहज मानिन्छ, विदेश हेर्ने बेइजिङको दृष्टिकोणलाई उत्ति नै असहज । चीन प्रवेश गर्दा वा बाहिरिंदा भर्नुपर्ने अध्यागमन फारममा विदेशीलाई ‘एलिन’ अर्थात् अर्कै ग्रहको जस्तो गरी सम्बोधन गरिएको हुन्छ । चिनियाँले विदेशीलाई ठग्दा पनि चिनियाँ प्रहरीले नजरअन्दाज गर्ने गर्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा यो मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
हिमाल खबर मा टीकाराम राईको लेख बाट सभार गरिए को !